Sago Mini ကိုသူငယ်ချင်းများ | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Sago Mini ကိုသူငယ်ချင်းများ
Sago Mini ကိုသူငယ်ချင်းများ APK ကို
သင်အကြိုက်ဆုံး Sago Mini ကိုသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတစ် playdate အပေါ် Go! မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏အိမ်သို့လမ်းလျှောက်ယူပါနှင့်ပျော်စရာစတင်ကြကုန်အံ့။ ရော်ဘင်ငှက်တစ် birdhouse fix Jinja နှင့်အတူကြောင်စားဆင်ယင်-up, play သို့မဟုတ် Harvey နှင့်အတူခွေးတစ်ဦးရေစာကိုခံစားကူညီပါ။ ငါးမိတ်ဆွေများနှင့်ထက်ပိုတစ်ဆယ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူစူးစမ်းဖို့အများကြီးရှိပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူအချိန် Play သားသမီးရဲ့ဘဝထိုကဲ့သို့သောအရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့ထွင်းထု, Sago Mini ကိုသူငယ်ချင်းများပြဇာတ်ဦးဆောင်လမ်းပြရန်လေးတွေဖိတ်ခေါ်ခဲ့။ Sago Mini ကို apps များ၏ဆုရ suite ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, app ကိုသင်နှင့်သင်၏သားသမီးမှအပြုံးများဆောင်ခဲ့ဦးမည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ apps များအားလုံးသည် Third-party ကြော်ငြာနှင့်လေးတွေအတွက်-app purchase အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးချင်းစီ app ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်က App များ, အထူးကမ်းလှမ်းချက်ပျော်စရာဗီဒီယိုများနှင့်ပိုပြီးအကြောင်းကိုသတင်းနှင့်အတူငယ်လေးတစ်အိုင်ကွန်လည်းမရှိ။
•ထောက်ကလေးအရွယ်တုန်းကအသက်အရွယ် 2-4 ဘို့အကြံပြု
• Wi-Fi သို့မဟုတ်အင်တာနက်မပါဘဲ Play
• In-app ကိုဝယ်ယူမှုများသို့မဟုတ် Third-party ကြော်ငြာမှမရှိပါ, ဒါကြောင့်သင်နှင့်သင့်ကလေးအတွက်ကြားဖြတ်မပါဘဲရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အခမဲ့များမှာ!
Sago Mini ကိုကစားရန်မြှုပ်နှံထားတဲ့ဆုရကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်မူကြိုကျောင်းသားများများအတွက် apps များနှင့်ကလေးကစားစရာပါစေ။ ကစားစရာအရုပ်တစ်ခုကိုအမျိုးအနွယ်ကိုစိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့်အံ့သြစရာမပေါက်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ဘဝမှစဉ်းစားဟန်ဒီဇိုင်းကိုဆောင်ခဲ့ရမည်။ ကလေးတွေသည်။ မိဘများအတွက်။ တဟီဟီရယ်သည်။
စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် bug ကိုပြင်ဆင်ခြင်းများ။
Sago Mini ကိုသူငယ်ချင်းများ
82.92 ကို MB
Sago Mini ကို
PBS မိဘများ Play & Learn